Breaking News: News गौहत्या प्रकरण ः नाङ्गिएको हिन्दू समाज
तीन दर्जन गाईको नृशंस तरिकाले हत्या भयो, त्यो पनि गोदावरी जस्तो पबित्र तीर्थस्थल नजिक । गौहत्या कसरी भयो ? कस्ले गर्दा गाइ मरे ? यसमा दोषी को हो ? किन यसरी राष्ट्रिय जनावरको सामुहिक हत्या हुने गरी कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाले निर्णय नै गरेर गाइ गोदावरी पुगाउने काम गरे ? यि सवै विषय छानविनका हुन् । राज्यका निकायले निष्पक्ष छानविन गरि दोषीमाथि कार्वाही पनि होला । घटनाको यो एउटा पाटो मात्र हो । गाई सामुहिक ?पमा मरे वा मारिए ? यी छानविनका विषय छोडेर घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो जोडिएको छ । ९० प्रतिशत हिन्दू, त्यसमा पनि गर्भाधान संस्कारदेखि मृत्यु संस्कार र मृत्युपछि गरिने संस्कारमा समेत गौमाताको दुध, गोवर र गहुँत प्रयोग हुने पवित्र जनावर यो अवस्थामा कसरी पुगे ? हिन्दू समाज यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा आफैं नांगिएको छ । अहिले गौहत्याका विषयमा भइरहेका आन्दोलन आफैमा बेइमान आन्दोलन भएको छ । दुुध दिंदासम्म घरमा पाल्ने र त्यसपछि सडकमा ल्याएर मर्नका लागि गाए छाड्ने दोषी को हो ? समाजले सोच्न सकेको छैन् । आन्दोलनका नाउमा अन्य धर्मावलम्बीलाइ दोष दिने, समाजलाई बिथोल्ने, समाजलाई असहिष्णु बनाउने तर समाजले गरेको ठूलो पापका विषयमा एक शब्द पनि नबोल्ने ? यो कस्तो आन्दोलन हो ? कुन उद्येश्यका लागि गरिएको आन्दोलन हो ? गाउँ छोडेर धनगढी महेन्द्रनगरजस्ता शहरमा हरेक दोस्रो घरमा गाइ पालेको देखिन्छ , गाउँमा गाई पाल्नेको संख्या निकै बढी छ तर गाई छाडा छोड्ने प्रवृत्ति शहरमा बढी देखिएको छ । शहरको देखासीखीमा गाउँका बासिन्दाले पनि केही समययता गाइ छाड्न थालेका छन् । यो कस्को कमजोरी हो ? कैलाली–कञ्चनपुरमा अहिले अनुमानित तथ्यांक अनुसार झण्डै ४ हजार छाडा पशु चौपाया छन् । यी सबै चौपाया हामी हिन्दूह?ले नै छाडेका हौं । यि गाइ बाहिरबाट आएका होइनन्, कसैले अन्य जिल्लाबाट ल्याएर छोडेको पनि होइन अनि कस्का वि?द्ध आन्दोलन ? के का लागि आन्दोलन ? गोदावरीमा भएको सामुहिक गौहत्याका वास्तविक दोषी हामी जनता हौं । जो आफूलाई कट्टर हिन्दूवादी सम्झन्छौं । हामीले गाईजस्तो पबित्र जनावरलाई मर्नका लागि सडकमा छाड्ने अनि दोष अ?लाइ दिने ? यो प्रवृत्तिले धर्मका विषयमा कुरा गर्ने हामिसंग नैतिक आधार पनि छैन् । कुन नैतिकताले हामी सामुहिक गौ हत्याको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौं ?
निधारभरि दजैनौं टिकाका धर्का लाएका व्यक्तिले बजारमा छाडा रहेका चौपायालाई निर्घात कुटपीट गर्न लागेका दृश्य दिनहुँ देख्न सकिन्छ ? धर्मको यो कुन ?प हो ? आस्थाको कस्तो स्व?प हो यो ? अनि कुन मुखले हामि गौ हत्या भयो भन्दै अ?लाई दोषारोपण गरिरहेका छौं । कञ्चनपुर माओवादीका नेता महेश जोशीले शंकरपुरमा छाडा गाई वस्तुका लागि खोलेको गौशाला सहयोग नपाएर बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ । सयौं गाई गो?को बासस्थानका लागि बनाइएको उक्त गौशाला आर्थिक अभावमा गाई राख्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । तर हामी गोदावरीमा भएको घटनालाई अतिरञ्जित बनाउने प्रयासमा लाखौं खर्च गर्न तयार छौं । धार्मिक आस्था बोकेका गाइवस्तुका उचित स्याहारका लागि कुनै योजनामा काम गर्न तयार छैनौं । यो कस्तो धर्म हो ? कस्तो धार्मिकता हो ? धर्मका नाममा राजनीति गर्ने तर धार्मिक आस्थालाइ कुल्चने प्रबृत्ति हामि आफैंमा विद्यमान हुँदासम्म गोदावरीमा भएका गौहत्या प्रकरण पटक पटक दोहरिन सक्छन् यो हेक्का समयमा राख्नु आवश्यक छ । धर्म परिवर्तन हुँदैछ, इसाइह? ठूलो रकम बाँडेर धार्मिक आस्था किन्ने काम गरिरहेका छन् यो सत्य हो । लामो समयदेखि मिशनका ?पमा इशाइह? धर्म परिवर्तनमा लागेका छन् । कसैलाई पनि आफ्नो धर्म ठीक हो भन्ने अधिकार छ त्यो अधिकार इसाइ संग पनि छ तर आफ्नो धर्मका लागि ठीक काम गर्ने मानसिकताको बिकास हिन्दूह?मा हुन सकेको छैन जसका कारण अन्य धर्मावलम्बीह?लाइ धर्म परिवर्तन गराउनमा ठूलो मद्दत पुगिरहेको छ भन्ने कुरा हामि बिर्सन थालेका छौं । ९० प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा गैर हिन्दूले गाइ मार्नेजस्तो जघन्य अपराध गर्न सक्दैन् । जे जस्ता घटना भइरहेका छन् यसमा दोषी हामी हिन्दू भनाउँदाह? आफैं हौं । यो दोष अन्य धर्मावलम्बीलाई दिएर आफूले गरेका र गरिरहेका कुकृत्यवाट हामि पन्छिन मिल्दैन । ’धारयते इति धर्म’ जे धारण गरिन्छ त्यो नै धर्म हो । शास्त्रह? यसै भन्छन् तर हामिले धारण गरेका कर्म कस्ता छन् ? छातीमा हात राखेर एक पटक हिन्दू हौं भन्नेले सोच्नु ज?री छ । कर्म जति गलत गर्ने अनि धर्मको दुहाइ दिएर समाजलाई भाँड्ने काम हामीबाट भएको छ । धार्मिक स्थलह? आस्थाका केन्द्र भन्दा पनि कमाउने र राजनीति गर्ने अखाडामा परिणत हुन थालेका छन् । गाउँ टोलका मन्दिर मठ जो आफ्नो आस्थाले निर्माण हुनुपर्ने हुन् ती सबै विदेशीका पैसाले निर्माण हुन थालेका छन् । विदेशीका पैसाले हामि आफ्ना धार्मिक क्रियाकलाप गर्न थालेका छौं । धार्मिक महोत्सवमा हामी अ?को सहयोगका लागि याचना गर्न थालेका छौं अनि कसरी हुन्छ धर्मको रक्षा ? इसाइह?ले अहिलेको पुस्तालाइ हेरेर होइन हाम्रो अर्को पुस्तालाइ हेरेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियान शु? गरेका छन् । आउने पिंढी पुरै इसाइ हुन सक्छ उनीह?को योजना अनुसार यो विषयमा हामिले सोचेका छैनौं ।
आज पनि हामी धर्मका नाममा संस्कृतिका नाममा, जातका नाममा, भातका नाममा विभाजित छौं । समाजको ठूलो हिस्सा आज आफूलाइ सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेको छैन् । जातिय ?पमा यति ठूलो पीडा बोकेको छ समाजको एउटा ठूलो हिस्साले यो विषयमा हामी सोच्न सकिरहेका छैनौं । समाजले आज पनि समाजको त्यो ठूलो हिस्सालाई समाजको मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको छैन । विभेदको जालो चारैतिर फैलिएको छ यो अवस्थामा गौ हत्याका विषयलाइ लिएर बखेडा खडा गर्नुको कुनै औचित्य छैन् । यसप्रति सबैले गम्भिर हुन ज?री छ । अहिले गौहत्या प्रकरण अगाडि आएको छ भोलि अर्को ठूलो घटना हुन सक्छ । केही समयपछि हाम्रा धार्मिक आस्थाका अ? धरोहरमाथि आक्रमण हुन थाल्छ । मठ मन्दिरह? समाप्त पार्ने प्रयास हुन सक्छन् । इतिहासमा कयौं पटक यस्ता घटना भएका छन् । मुश्लिम नवा गयासुद्दीन देखि भारतलाई गुलाम बनाउने इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले पटक पटक हिन्दू समाज समाप्त गर्ने प्रयास गरेको हो । जुन प्रयासस्व?प हाम्रा धार्मिक धरोहरह? भत्काइएका हुन्, आज पनि त्यसरी हिन्दू समाजमाथि भएका आक्रमणका अवेशष बाँकी छन् । फेरी एकपटक हिन्दूह?ले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । अनि आवश्यक छ आफैंबाट सुधार गर्ने अभियान ।
समग्रमा भन्नु पर्दा गोदावरी गौ हत्या काण्डले हिन्दू समाजलाई नराम्ररी नंग्याएको छ । हामी कुन अवस्थामा छौं ? हाम्रा सोच र प्रवृत्ति कस्ता छन् ? हाम्रा क्रियाकलाप कस्ता छन् ? धार्मिक विषयमा हामि कुन धरातलमा छौं ? यी विषयमा नसोच्ने हो र हिन्दू समाजले आफूलाइ सुधार नगर्ने हो भने यस्ता घटनाको पुनरावृति पटक–पटक भइरहन्छ । कर्मचारीको परिचय